Thursday November 07, 2019 - 10:19:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in qaar kamid ah howlwadeenna shabakadda Twitterka ay sameeyeen fal jaajuusnimo oo ka shaqeynaya masaalixda qoyska haya talada dowladda Sacuudiga.
Wargeyska Washington Post oo soo xiganaya saraakiil katirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in howlwadeenna hore oo katirsan Twitter ay udhaceen xisaabaadka shakhsiyaad si aad ah u mucaaradsan dowladda Sacuudiga kuwaas oo ku nool wadamada reergalbeedka.
David Anderson oo ah dacwad soo oogaha guud ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ay su'aalo weydiinayaan ugu yaraan sedax qof Sacuudiyaan ah oo ku lug lahaaday falka Jaasuusnimo ee loogu dhacay xisaabaad ay siyaasiyiin mucaarad sacuudiyaan ah ku lahaayeen barta Twitter-ka.
Dadka la jaasuusay waxaa kamid ah ninka mucaaradka Sacuudiyaanka caanka ah ee lagu magacaabo Cumar Bin Cabdil Caziiz kaasi oo si aad ah ay isugu dhowaayeen saxafigii lagu dilay wadanka Turkiga ee Jamaal Khaashuqji.
FBI-da ayaa xaqiijisay in laxiray nin lagu magacaabo Axmed Abuu Camu oo heysta dhalashada Mareykanka kana mid ahaa shaqaalaha shirkadda Twitter, ninkan iyo laba kale oo shaqaalaha shirkadda Twitter katirsan ayaa ku eedaysan in ay jabsadeen ciwaannada 6000 oo qof kuwaas oo ay ka dusiyeen macluumaad sir ah oo faa'iido u ahaa qoyska haya talada dalka Sacuudiga.